सफल अमिरको १० फल्प फिल्म « Naya Page
सफल अमिरको १० फल्प फिल्म
काठमाडाैं(एजेन्सी) : नायक अमिर खान बलिउड मिस्टर पर्फेक्शनले पनि परिचित छन् । यसको एउटै कारण हो उनी अभिनित प्रत्येक फिल्मले आफ्नै रेकर्ड तोड्नु । अर्थात् बलिउडमा नयाँ रेकर्ड कायम राख्नु । थोरै फिल्ममा खेल्ले तर प्रफेक्ट । उनको केही समय अगाडी मात्रै प्रदर्शनमा आएको फिल्म हो दंगाल । यसले भने नयाँ रेकर्ड कायम राख्न सकेनन् । त्यसैले अमिर त्यति सन्तुष्टी छैनन् । तर, पनि उत्कृष्ट ब्यपार गर्याे । कारण बलिउडमा नयाँ रेकर्ड कायम राख्न नसक्नु हो । अघिल्ला फिल्महरुले झैँ यसले आफ्नै रेकर्ड तोड्न सकेनन् । उनको धेरी फिल्म ब्लकबस्टर भएका छन् । गजनी, थ्री इडियट्स्, धुम ३, पिकेले सुप्पर डुप्पर ब्यापार गरे । तर, उनले अभिनय गरेका केही फिल्म पनि छन् जसले उनलाई बलिउडमा करिअर धरासायी बनाएका थिए । त्यस्ता फिल्महरु भध्ये खान अभिनित फल्प भएका १० फिल्म निम्न रहेका छन् ।
१, लभ लभ लभ
अमिर खानको लागि यो फिल्म को आयो कता गयो जस्तै भयो । सन् १९८९ मा प्रदर्शनमा भएको थियो । बब्बर साुभाषले निर्देशन गरेको गरेका थिए । आमिर खान, जुहीचावला, गुलशनग्रोवर, दिलीपताहिल, ओम शिवपुरी लगायतका अभिनय रहेको थियो ।
२, जवानी जिन्दाबाद
सन् १९९० मा प्रदर्शन भएको थियो । यसले पनि खानलाई त्यस्तो केही चमत्कार गर्न सकेनन् । अरुण भट्टले निर्देशन गरेको फिल्ममा आमिर खान, फरहानाज, कादर खान, जावेदजाफरी, असरानी लगायतले अभिनय गरेका थिए।
३, तुम मेरे हो
यो पनि उस्तै रह्यो । सन् १९९० मै प्रदर्शन भएको थियो । जवानी जिन्दावादकै बाटो लियो । ताहिर हुसैनले निर्देशन गरेको थियो आमिर खान, जूही चावला, अजित वाच्छानी, राजेन्नाथ जुत्शी, सुधिर पाण्डे लगायतले अभिनय गरेका थिए ।
४, अब्बल नमबर
यो फिल्मले पनि नाम अनुसारको काम गरेनन् । उल्टै असफ बन्यो । सन् १९९० मै रिलिज भएको थियो यो पनि । यो फिल्मले न अमिरखानलाई स्थापित गरे नत अरूलाई नै । खानसँगै देव आनन्द, आदित्यपंचोली, नीता पुरी, एकता बहल लगायतले अभिनय गरेका थिए ।
५, दौलत कि जङ्ग
यहाँ सम्म आइपुगदा पनि खानलाई उत्ति चिनेनन् । असफलता मात्रै मिल्यो । यो फिल्म १९९२ एस. ए. कादेरको निर्देशन रहेको थियो । जूहीचावला, कादर खान, परेश रावल लगायतका ले यो फिल्ममा अभिनय गरेका थिए ।
सन् १९९० मा प्रदर्शन भएको यो फिल्म खानलाई असफलताको परम्परा जस्तै बन्यो । यहँ सम्म आइपुग्दा खानले असफलता मात्रै ब्यहोरेनन् बलिउडमा आफ्नो करिअर धरासायी बन्दै गएको थियो । यश चोपडाको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा सैफ अलीखान, विनोद खन्ना, रवीना टंडन, सुनिल दत्त लगायतका अभिनय गरेका थिए ।
यसको पनि ब्यपार उस्तै बन्यो । कुनै बाजी मारेनन् । बाजी हारे जस्तै बन्यो । १९९५ प्रदर्शन भएको यो फिल्म आशुतोष गोवारिकरले निर्देशन गरेका थिए । खानसहित ममता कुलकर्णी, कुलभुषण खरबंदा, असरानी लगायत थिए
८, आतङ्क हि आतङ्क
यसले पनि खानलाई उहीँ मार्गमा डोहो¥याए । यो फिल्म दिलीपशंकरको निर्देशनमा सन् १९९५ मा प्रदर्शन भएको थियो । जूहीचावला, रजनीकान्त, अर्चना जोगलेकर, ओम पुरी लगायतले अभिनय गरेका थिए ।
सन् १९९९ मा प्रदर्शन भएको यो फिल्ममले अन्यको तुलनामा औसत केही राम्रो प्रतिक्रिया आए पनि ब्यपार राम्रो गरेनन् । इन कुमारले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा मनिषाकोइराला, अनिलकपूर, रानीमुखर्जी, शर्मिला टैगोर लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
सन् २००० मा प्रदर्शन भएको थियो यो फिल्म । धर्मेन्द्र दर्शनले निर्देशन गरेको थियो । आमिर खानसहित, ऐश्वर्या राय, ट्विङकल खन्ना, फैसल खान, टिन्नू बर्मा लगायतले अभिनय गरेका थिए । यो फिल्मले पनि राम्रो ब्यपार गरेनन् । यो फिल्म फल्प भएपछि ट्विङकल खन्नाले अक्षकुमारसंग विवाह गरेकी हन् ।
मनिषा कोइरालाद्वारा कर्णालीमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
चर्चित भारतीय अभिनेता दिलिप कुमार अस्वस्थ, अस्पताल भर्ना